အဘယ်သို့ငါ porn flashbacks နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသနည်း - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
အဘယ်သို့ငါ porn flashbacks နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါသနည်း
သင်အသုံးပြုနေတဲ့ရပ်တန့်ပြီးနောက်မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်အရက်နှင့်မတူဘဲ porn flashbacks သငျ့စိတျထဲမှာလှည့်ပတ်ဆွဲထားနိုင်ပါတယ်။ တဦးတည်းပေါ်လာသည့်အခါဒါကြောင့်သင်ဘာလုပ်သလဲ?
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနည်းနှစ်နည်းသည်မှာပထမ ဦး ဆုံးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအကြောင်းဆွေးနွေးကြစို့။ ကျွန်ုပ်၏ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုလည်းနားထောင်ပါ Brett (#21 ပြသ) porn တွေကိုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဘယ်လိုကရှင်းပြသည်
ဒီတိုတိုဗီဒီယိုမှာအကြံပေးချက်အနည်းငယ်ရှိပါတယ် - စွဲလမ်းမှု၏အမှန်တရားအသုံးပြုပုံတဏှာပြီးတော့တိုက်တွန်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းအားဖြင့် Porn စွဲရပ်တန့်ဖို့ဘယ်လို။
သငျသညျညစ်ညမ်းပုံရိပ်များမှသင်၏လိင်စိတ်နိုးထလွတ်မြောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ဆိုပါက (သင်အမှန်တကယ်မိတ်ဖက်ပိုပြီး arousal ရှာတွေ့ခြင်းသို့မဟုတ် erectile ကျန်းမာရေးပြန်လည်ချင်တယ်ဆိုရင်အကောင်းတစ်စိတ်ကူးဖြစ်သော), (အခါသင်ရပါမည်) porn သို့မဟုတ် flashbacks မသုံးဘဲ masturbate ရန်သင့်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။ ဒါကသင့်ဦးနှောက်ဟာ flashbacks ထွက်လာပါတယ်သောဆက်သွယ်မှုအားနည်းစေမယ့်အခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေကိုအပေါ်အစားအာရုံစိုက်ပါ။ ကာမဂုဏ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ။ ကောင်းမွန်သောအတွက် Luxuriate ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခံစားချက်များကို။ fantasize မထားပါနဲ့။ သင်တစ်ဦးပုံရိပ်ကိုအသုံးပြုရမည်ဆိုပါက, သင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသိကျွမ်းသူတစ်ဦးဦးနှင့်အတူတစ်ဦးကိုမှန်ကန် (နှင့်လက်တွေ့ကျကျ) တှေ့ဆုံစဉ်းစားစဉ်းစားပါ။ ပိုပြီးအဘို့အတွေ့ ငါဘယ်လိုညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲ masturbate သလဲ? (နှင့်ထိုစာမျက်နှာအောက်ရှိဆောင်းပါး) ။ သင်ဤနည်းဖြင့်အထွတ်အထိပ်မရရှိပါကသင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်တကယ်မဖြစ်လာပါ လိုအပ်ချက် အထွတ်အထိပ်; "သင်ယူ" မတရားသောသင်တို့အားမောင်းနှင်နေကြသည်။
rewiring နည်းစနစ်နှင့် ပတ်သက်. အထွေထွေအင်ဖိုမှာတွေ့နိုင်ပါသည် သင့်ရဲ့ဦးနှောက် Rewiring။ တိကျသောနည်းစနစ်များအတွက်တွေ့မြင်:
Smithereens သင်၏ဗီဒီယို Flashbacks မှုတ်
အဆိုပါအမြန် Phobia ရောဂါကုထုံး
နောက်လာမယ့် Flashbacks အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်သုံးနိုင်သောဖိုရမ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး မှဤနည်းလမ်းသည်ဤတွင်ဖြစ်သည်။ အေးဆေးတည်ငြိမ်နေချိန်မှာမင်းအဲဒီလိုလုပ်ဖို့လိုတယ်။ flashbacks ပေါ်လာသည့်အခါထိုအခါ၎င်းကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည် လာမယ့် အချိန်။
သင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုငြိမ်းချမ်းသောအရာတစ်ခုခုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ၎င်းသည်ငြိမ်းချမ်းသောနေရာ၊ နေဝင်ချိန်ကဲ့သို့သောလှပသောအရာတစ်ခု၏ပုံတစ်ပုံဖြစ်နိုင်သည်။ သင့် ဦး နှောက်ကဘာမှထူးခြားမှုမရှိတဲ့အတွက်ဒါဟာတကယ်လားစိတ်ကူးလားမအရေးမကြီးဘူး။
(၁) အသက်ပြင်းပြင်းရှူပါ။ အသက်ရှူပြီးတဲ့နောက် 'ငြိမ်းချမ်းရေး' ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအေးအေးဆေးဆေးပြောပါ
၂။ အခုငြိမ်းချမ်းပြီလားဆိုတာမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။ ကြည့်လိုက်စမ်းပါ
3 - ဘယ်လိုအသံထွက်မလဲဆိုတာနားထောင်ပါ
၅ - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းရယူပါ။ ငြိမ်းချမ်းသောသူတစ် ဦး အသက်ရှူသည့်နည်းကိုရှူပါ
6 - သင်၏အနေအထားကိုငြိမ်းချမ်းသောအနေအထားသို့ပြောင်းပါ။ သင်ငြိမ်သက်မှုရှိပါကသင်ဆန္ဒရှိသည့်အတိုင်းထိုင်ပါသို့မဟုတ်ရပ်ပါ
၇။ တဖန်“ ငြိမ်းချမ်းရေး” ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပါ၊ သင်မြင်သောအရာကိုပြန်သတိရ၊ ကြား၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရကြည့်ပါ။
၈ - ဤခံစားချက်ကိုအားဖြည့်ရန်အဆင့် ၇ (သို့မဟုတ် ၁-၇) ကိုအကြိမ်အနည်းငယ်ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ
သင်၏စိတ်သည်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည့်အခါ၊ ၎င်းကိုနက်ရှိုင်းသောအသက်ရှူခြင်းဖြင့်ကြားဖြတ်။ 'ငြိမ်သက်ခြင်း' ဟုအတိအကျတခါတည်းပြောခြင်းဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုရယူပါ။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်စုံတစ် ဦး ၏အခန်းကဏ္actingကိုသရုပ်ဆောင်လျှင်သင်ထိုင်ခုံတွင်ထိုင်ပါသို့မဟုတ်ရပ်တည်ပါ ငြိမ်းချမ်းရေး, ငြိမ်းချမ်းသောသူတစ် ဦး ကဲ့သို့ရှူ။
၎င်းသည်သင်၏စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်စေသည်။ ငြိမ်းချမ်းရေးသည်မလုံလောက်ပါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားပစ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ် (အနည်းဆုံးအားဖြင့်၎င်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအားအားနည်းသွားစေနိုင်သည်။ ) 'ငြိမ်းချမ်းရေး' ဟူသောစကားလုံးကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာထပ်ခါတလဲလဲကြည့်ပါ၊ အေးအေးဆေးဆေးပဲနေပါ၊ မင်းကြားတာနဲ့ခံစားခဲ့ရတာတွေကိုမှတ်ထားပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအစားငြိမ်းချမ်းရေးကိုအာရုံစိုက်ရန်သင့်စိတ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း / ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းပြုလုပ်လိမ့်မည်။ သတိပြုရမည်မှာအထက်ပါအဆင့်များအတိုင်းသင်ပြောရမည်ဖြစ်သည်။
ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရပ်တန့်သွားစေနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကသင်၏ 'ငြိမ်းချမ်းရေး' တုံ့ပြန်မှုကိုအလိုအလျောက်ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်၊ အခြေခံအားဖြင့်၊ ဒါကသင့် ဦး နှောက်ကို“ ပြန်ပေး” နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတခုဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်မလိုချင်တဲ့ရုပ်ပုံပေါ်လာတိုင်းမင်းကငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦး တည်သွားတယ်၊ အဲဒါကနောက်ဆုံးမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားစေတယ်။
nofap / reddit အပေါ်မေးခွန်းတစ်ခုကို။ အကြံပြုချက်များများအတွက်လင့်ခ် Follw
နှစ်ရက်မှသုံးရက်ကြာ nofap ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်အတိတ်ကာလကကျွန်ုပ်မြင်တွေ့ခဲ့ရသောညစ်ညမ်းဗီဒီယိုတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်ခေါင်းပေါ်ပေါ်လာပြီးသူတို့ကိုကျွန်ုပ်မကြည့်မချင်းပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်ပါ။
ငါဒါကြောင့်မရေမတွက်နိုင်သောကြိမ် nofap ပျက်ကွက်ပါတယ် ငါတိုးတက်မှုအချို့ကိုတွေ့မြင်ရလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါက porn ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုကြည့်ချင်တဲ့ဆန္ဒလုံးဝမရှိဘူး၊ ဒါပေမဲ့အရင်ကကြည့်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုအဟောင်းတွေကငါ့ကိုတစ်ချိန်လုံးလိုက်ရှာနေတာပဲ။
ငါအသံသေးတဲ့ခွေးကဲ့သို့မြည်ချင်ကြဘူး။ ဒီတော့အဖြေကတော့ဆန္ဒကိုလက်လျှော့ဖို့မဟုတ်ဘဲအကြံဥာဏ်ကအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။ ကျွန်ုပ်၏မှတ်တမ်းသည်ကိုးရက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ပျက်ကွက်သည့်အချိန်အများစုမှာ ၂.၃ သို့မဟုတ် ၄ တွင်ဖြစ်သည်။ မင်းဘယ်လိုကျော်လွှားခဲ့တာလဲ
ဒီ porn စွဲလမ်းမှုကိုငါငြီးငွေ့နေတယ်။
ပြီးခဲ့သည့်ပို့စ်တွင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သကဲ့သို့ငါမိန်းကလေးနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ရည်းစားနှင့်အတူရှိနေသော်လည်းအာရုံပျံ့လွင့်နေသည်။ ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်းများစွာ၊ လှပသောမိန်းကလေးငယ်များကိုမြင်ရခြင်းသည်သူတို့နှင့်စကားပြောရန်သို့မဟုတ်သူတို့အကြောင်းကိုပင်စိတ်ကူးယဉ်မည်မဟုတ်သော်လည်းအိမ်ကိုအမြန်ပြန်လာရန်ငါကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ငါဟာဆေးလိပ်တချို့သောက်တဲ့နောက်စီးကရက်သောက်တာနဲ့တူလိမ့်မယ်ထင်တယ်
အခုတော့ငါကြည့်နေသောမိန်းကလေးများနှင့်တဖြည်းဖြည်းကွဲပြားခြားနားသည်ဟုခံစားမိသည်။ သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာအမြဲရှိနေတယ်။ သူတို့ကငါ porn ကနေရယူဖူးတဲ့ flashbacks တွေလိုအားကောင်းလာတယ်၊ ဒါကတမ်းတနေပေမယ့်အဲဒါကိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ အလေးအနက်ထားပြောရရင်ဒီလွန်ခဲ့တဲ့ ၁၈ ရက်က porn ကိုကြည့်စရာမလိုဘူး။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဒုတိယ Flashback ကိုငါပိတ်လိုက်တယ်။ flashbacks များသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာမှအလွန်ထူးဆန်းသောတုံ့ပြန်မှုကိုမရှိသလောက်နည်းသော်လည်း၊ ၎င်းတို့ပြုလုပ်လျှင်ပင်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုပိတ်ဆို့နိုင်သည်။
ပြီးတော့မနေ့ကငါတွေ့တဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့အတူတူပဲလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။ ငါကသူတို့ကိုကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်မတစ်ခု option ကိုဖြစ်ခဲ့သည်ခံစားရတယ်။ ထိုအခါငါမကြည့်ဖို့ option ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ - ငါမလိုအပ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ်သူမှသူတို့ရဲ့ ဦး နှောက်ထဲမှာမဆိုပုံရိပ်တွေမှစိတ်ကူးယဉ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ငါတို့အားလုံးသည်ပြည့်ဝစုံလင်သောလိင်ဘ ၀ ကိုပိုင်ဆိုင်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်။
ဒါကြောင့်မနေ့ကငါဟာတပ်မှူးပဲလို့ခံစားရတယ်။ ငါရွေးချယ်နိုင်သည်: စဉ်းစားရန်, သို့မဟုတ်မစဉ်းစားရန်, ကြည့်ဖို့, ဒါမှမဟုတ်ကြည့်ဖို့, အော်ဂဇင်ဖို့, ဒါမှမဟုတ်အော်ဂဇင်ရန်မ။ ဒီခံစားချက်ကိုဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ငါမလုပ်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဆက်ပြောနိုင်မယ့်အချက်ကောင်းတစ်ခုလို့ငါထင်တယ်။ ငါပြန်ဖြစ်ရင်တောင်ငါတစ်ချိန်ချိန်မှာငါထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်။
“ Flashbacks” သည်ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သောမှတ်ဉာဏ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ
က) ရေဒီယိုအတွက်အဆိုတော် (မယ့်ဥပမာကို ထောက်. ၎င်းကြားနေထားသောစာပိုဒ်တိုများဘို့ပြောပါရစေ "သွားစို့, သွားစို့!") တစ်ဦးအခြို့သောကျမ်းပိုဒ်သီဆို။ ဤကျမ်းပိုဒ်တစ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုငါ့ကိုသတိပေးသောအခါငါတစ်ချိန်က porn အတွက်မြင်လျှင်, အခင်းဖြစ်ပွားရာ (ပေါ်မှာတစ်အတွေးအနည်းဆုံး) ချက်ချင်းလည်းမရှိ။
ခ) ငါအင်တာနက် / ရေဒီယို / တီဗီအတွက်တိုက်ကြီးသို့မဟုတ် City, / အခြို့သောနိုငျငံမြား၏နာမကိုမြင်ခြင်း, ကြားခြင်းနှင့် ... မြင်ကွင်းများ / စာမျက်နှာများ / အမှတ်တရများရှိပါတယ်။ သငျသညျအမြားဆုံးဖွယ်ရှိသိကြသကဲ့သို့, porn ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုအတိအကျအမျိုးအစား, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး "ဘရာဇီးမိန်းကလေးများ", "အမ်စတာဒမ်နီအလင်း" ကဲ့သို့အမှုအရာသို့မဟုတ်သမျှလည်းမရှိ။ " ... ဟေ့, အဘယ်သို့သောအကြောင်းစာမျက်နှာ XY?!": အကျိုးဆက်အဖြစ်မကြာမီငါဥပမာ "ဘရာဇီး" နားမထောင်သကဲ့သို့ငါအချို့မြင်ကွင်းများကိုမှတ်မိခြင်းနှင့်ထင်
ပို. ပင်ထူးထူးဆန်းဆန်း, တခါတရံတွင်ငါပင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခလုတ်ခွဲခြားသတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်, တစ်စုံတစ်ဦးကမကြာသေးမီကလုံးဝကြားနေဝေါဟာရကို "Frau" ( "မိန်းမ" များအတွက် = ဂျာမန်) ကို အသုံးပြု. ခံခဲ့ရသည်နှင့်ငါ၏စိတ်ကိုချက်ချင်းခဲ့: အမျိုးသမီးတစ်ဦး = လက်ချောင်း, ဆပြောက်, squirting, အော်ဂဇင် ... bla bla ။ ဆိုလိုသည်မှာဖြစ်ပျက်နှင့်တကယ်ကိုကျွန်မနီးပါးအတိုင်းညစ်ပတ်စဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ, ယေဘုယျသို့မဟုတ်တိကျတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏အထင်မနိုင်အချို့သောရက်ပေါင်းတွင် ... ငါ့ကိုကြောက်လန်အကြောင်း, ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ပါ။
ဂ) ထူးဆန်းအလုံအလောက်တောင်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ခါတစ်ရံ, မိုက်မဲညစ်ညမ်းပစ္စည်းပစ္စယကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ ကြောင်းသည်အဘယ်ကြောင့်ငါမသိရပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဒါဟာလဲဖြစ်နိုင်, (အချို့ညစ်ညမ်းမြင်ကွင်းများပင်ဟာသနဲ့တူထားကြပါတယ်ငါသည်ငါ့ကားထဲတွင်ကားမောင်းရုံရီစရာသရုပ်ဆောင်များ၏ဘို့အလိုငှါ, ငါ porn ထံမှအချို့သောစာပိုဒ်တိုများတုပဖို့အကြောင်း, ဒါကြောင့်သင်အတိအကျမှတ်မိနေ အဆိုပါ Shit, သူတို့လုပ်နေတာနဲ့ပြောနေခဲ့ကြသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းက) ကသရုပ်ဆောင်များကိုနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအဘို့အကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏ပင်တစ်မျိုးပါပဲ။
ငါမှန်း, အဓိကအရာသင်တို့သည်ဤအစပျိုးဖော်ထုတ်ပြီးတော့သူတို့ကိုရပ်တန့်ဆိုလိုသတည်း။ ၏သင်တန်းကို double entenders ၏ဟောပြောချက်နှင့်ရီစရာ porn ဆွေးနွေးချက်အပါအဝငျ။ ကြှနျတေျာ့အတှေ့အကွုံများတွင်အထူးသဖြင့်အဲဒီနှစျခုအပြုအမူတွေကောင်းတစ်ဦးအရာဖြစ်သည့်အကြောင်းကို7ရက်ပေါင်းတစ်ကိစ္စအတွက်လျှော့ချ။